Doodii T.V qaranka uganda qodobki ugu muhiimsanaa ee siyaasadda arrimaha dibada waxa uu ahaa ciidamada Uganda ka jooga Soomaaliya. – STAR FM SOMALIA
Doodii T.V qaranka uganda qodobki ugu muhiimsanaa ee siyaasadda arrimaha dibada waxa uu ahaa ciidamada Uganda ka jooga Soomaaliya.
Iyadoo ay 3 maalin un ka harsantahay doorashada madaxtinimada Uganda ayaa waxaa ay xalay dood kulul dhex martay musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha.
Doodaan oo aheyd tii labaad oo TV-ga qaranka laga sii daayo, ayaa xalay waxaa marki ugu horreysay ka qeybgalay madaxweynaha wadanka Uganda Yuweri Msevani.
Xukuumadda Somaliya ayaa Baarlamaanka waxa ay horgeyn doontaa Qodobo ka mid ah Dastuurka KMG ee dalka Somaliya oo Dib u eegis lagu sameeyay.
Madaxweynaha oo kulamo kula yeeshay Jarmalka Madax iyo Diblomaasiyiin caalami ah